ဓမ္မပူဇာ အစီအစဉ်များ: ဓမ္မဒူတဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒဦးဆောင်မှုဖြင့်ကျင်းပမည့်သွေးလှူဒါန်းပွဲ
ထို့ အပြင်လိုချင်စရာများ လောကအလယ်များပြားနေပြန်သည်။အလိုလောဘတို့ တနင့်တပိုးဖြစ်နေတတ်ပါသည်။ စွန့်လွှတ်ရန် ခက်ခဲသူတို.အတွက် နိဗွာန်ဟူသော ငြိမ်းအေးရာသည်လည်း ရရှိဖို့ရန် ထိုသူတို.အတွက် ခက်ခဲသောအရာတစ်ခုပင် ဖြစ်ချေတော့သည်။ ယခုအခါတွင် ဆရာတော် ဓမ္မဒူတအရှင်ဆေကိန္ဒ ဦးဆောင်သော မြင့်မြတ်ဖြူစင် သွေးလှူရှင် အသင်းသည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အမျိုးသားသွေးစုဘဏ်တွင် ၃၀. ၆ . ၂၀၁၁ ( ကြာသပတေးနေ့ ) တွင်စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ကြပါမည် ။ ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူ သဒ္ဓါကြည်လင် စေတနာရှင်အပေါင်းတို့အနေဖြင့် မိမိတို.စွမ်းအားရှိသမျှ ဒါနဥပပါရမီ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြပါစေခြင်း အလို.ငှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအမျိုးသားသွေးစုဘဏ်တွင် ၃၀. ၆ . ၂၀၁၁ ( ကြာသပတေးနေ့ ) ၌ သွားရောက်၍ လှူဒါန်းနိုင်ကြပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါသည်ခင်ဗျား။
Posted by ကျနော်ဝေယျာဝစ္စ သမား at 6/20/2011 07:44:00 AM
at 6/20/2011 07:44:00 AM